Qalabka Android Pie beta wuxuu gaaraa OnePlus 3 iyo 3T Yurub gudaheeda | Androidsis
Eder Ferreno | | OnePlus, Noocyada Android
Muddo ka hor ayaa lagu dhawaaqay in Android Pie ayaa loo bilaabi lahaa OnePlus 3 iyo 3T. Dhawaan beta horeyba si rasmi ah ayaa looga bilaabay Shiinaha. In kasta oo waqtigaas aan waxba laga xusin sii deynta cusboonaysiinta Yurub. Nasiib wanaag, tani hadda way dhaceysaa, maxaa yeelay beta-kan ayaa si rasmi ah looga bilaabay qaaradda Yurub.
Waxay ahayd wax shalay dhacay. Cusboonaysiinta 'Android Pie' ee labadan OnePlus 3 iyo 3T mar hore ayaa la geeyay Yurub. Marka adeegsadayaasha leh mid ka mid ah moodelladan horeyba waxay u heli karaan si rasmi ah. Wax dad badani hore u filayeen.
Tani waa Community Beta, sidaa darteed laguma sii dayn OTA sida cusbooneysiinta kale. Laakiin adeegsadayaashu waa kuwa ay tahay inay ku soo dejiyaan gacanta iyaga oo ku jira OnePlus 3 ama 3T kiiskan. Inkasta oo ay tahay geedi socod aan soo bandhigin dhibaatooyin.
Waa wax aan caadi ahayn astaanta, maaddaama moodooyinkeedii ugu dambeeyay Bulshooyinka Beta ay tahay dhif in la arko. Laakiin xaalad kastoo jirta, waan arki karnaa taas ugu yaraan Android Pie ayaa durba loo bilaabay taleefannadan. Cusboonaysiin ay isticmaaleyaashu sugayeen ilaa bilowgii sanadka.
Sida aan soo sheegnay, mulkiilayaasha OnePlus 3 ama 3T kaliya waa inay soo dejiyaan beta su'aal ayaa ku jirta taleefanka. Tan awgeed, shirkaddu waxay horeyba u dhigtay xiriiriyeyaal meesha aad ku jirto, si aad ugu rakibi karto taleefankaaga. Waa suurtagal xiriiriyadan:
Community Beta ee loogu talagalay OnePlus 3
Community Beta ee loogu talagalay OnePlus 3T
Xilligan ma ogin goorta nooca xasiloon ee Android Pie la soo dayn doono midkood labadan taleefan. Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa haddii beta-kani uu si fiican u shaqeynayo. Haddii ay jiraan dhibaatooyin yar kiiskan, markaa waxay helayaan nooca xasilloon sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Waan feejignaan doonaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus 3 iyo 3T waxay ku helaan Android 9 Pie Yurub